Tọ ： Mmanụ aeyụ
Ejiri popcorn na bọta mmanụ a eachụ mee ibe ha. Nri uto nke ọka na-aja mma nke butter butter, na imetụ mmanụ a honeyụ na-amalite ma ụtọ abụọ.
1.Hapụtara ahịhịa Indiam Popcorn ka emere site na ọka ero, sirop sirop na sirop na caramel dị elu iji wee hụ ụtọ eke na ụtọ.
Nchọgharị ahụike dị mma Anyị na-eji akụ nkwụ nkwụ sitere na mmanụ nwere obere mmanụ nwere obere mmanụ calorie wee hụ ahụ ike nke ngwaahịa anyị.
3.Ndị anụ ahụ na ihe ụtọ Healthy, gburugburu na bọọlụ zuru oke, uto na-acha ọkụ, agba na-enwu gbaa, enweghị isi ike na-enweghị eriri.
4.Unique technology Indian popcorn emewo ngwa ngwa mmepụta ihe na-akpaghị aka, na-eji teknụzụ nke oge a na-amị amị, mgbasawanye dị ziri ezi, bọọlụ gbara gburugburu ma juputara, na-agbanye kpamkpam
5: Iji hụ na mmụba na njupụta nke popcorn, ụtọ anụ ahụ, ụlọ ọrụ anyị mepụtara teknụzụ pụrụ iche nke nkeji iri na asatọ (ma kwupụta patent mba), nke mere na popcorn na-eme ka ọ dị mma, shuga na-abanye, na-enye ume ọhụrụ, isi,
ka popcorn mma nụrụ ụtọ nke nkịtị
Nchịkọta iko: 3 x 33 × 34 (cm)
Ebe ọ bụ na popcorn dị mfe mmiri, ọ ga-efunahụ ya na ụtọ ọhụrụ uto mgbe mmiri gwụchara ya, yabụ popcorn adịghị mfe idobe ogologo oge, yabụ a ga-eri ya ọhụrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ya, debe ya nke ọma na ebe kpọrọ nkụ iji gbochie mmiri mmiri.
Popcorn bụ ụdị puffed dị adị n'oge ochie. Ọtụtụ narị afọ gara aga, ihe olu olu bụ anyaukwu. Tupu ndị mbịarambịa Europe kwagara na "ụwa ọhụrụ" a, ndị India bi na kọntinent a nọ na-eri eri popcorn.
Mgbe ọ laghachiri Europe, Columbus kọwaara ndị mmadụ otu ihe ngosi doro anya nke ụmụaka India na “ụwa ọhụrụ” na-eji ihe olu akwa popcorn na-aga n'okporo ámá. Ọ bụkwa ndị India kụziiri ndị Europe kwabatara ọhụrụ usoro nke ịkọ na osi ọka.
Nke gara aga: Ude Flavored INDIAM Popcorn 118g
Osote: Buru Sesame Popcorn na akpa